Suicide Squad (2016) EXTENDED | MM Movie Store
Hype တှမြေားလှနျးလို့ တကယျ့ဇာတျကားထှကျလာတော့ထငျသလောကျခရီးမရောကျဖွဈခဲ့ရတဲ့ ဇာတျကားကိုဘယျလိုဘယျပုံတှကေောငျးကွောငျး ဆိုးကွောငျးထပျပွီး မညှနျးခငျြတော့ပါဘူး။မြှျောလငျ့ထားသလောကျ ဖွဈမလာပမေယျ့မကောငျးဘူးလို့တော့လဲလုံးဝပွောလို့မရတာတော့အမှနျပါဒါ့ကွောငျ့ ဇာတျလမျးသှားလေးပဲ နညျးနညျးညှနျးပေးပါရစေ။
ဇာတျကားကို Batman နဲ့ Supermanရဲ့တိုကျပှဲအပွီးSuperman သဆေုံးသှားတဲ့နောကျပိုငျးကာလမှာဇာတျအိမျတညျထားပါတယျ။
အစိုးရအဖှဲ့အနနေဲ့ Supermanလို လူစှမျးကောငျးမြိုးသာ ဆိုးသှမျးတဲ့ဘကျကနေ လူသားတှကေိုဒုက်ခပေးမယျ့Villainတဈဦးဖွဈနမေယျဆိုရငျ ဆိုတဲ့စိုးရိမျစိတျတှဖွေဈလာကွတဲ့အတှကျAmanda Waller ဆိုတဲ့အမရေိကနျအစိုးရအဖှဲ့မှ အမြိုးသမီးကွီးရဲ့အကွံအစညျကDC ရဲ့နာမညျကြျော Villainsကွီးမြားနဲ့အဖှဲ့တဈခုထူထောငျပွီး အစိုးရအနနေဲ့မဖွရှေငျးနိုငျတဲ့ကိစ်စမြားကိုသူ့ရဲ့Task Force X ချေါ Suicide Squad အဖှဲ့ကိုလှတိပွီးဖွရှေငျးစဖေို့ပဲဖွဈပါတယျ။
Amanda ရဲ့ အကွံအစညျအောငျမွငျမလားဒီvillainsကွီးတှကေိုရောသူထိနျးခြုပျနိုငျပါ့မလားSuicide Squadအဖှဲ့သားတှကေရောဘယျလိုအန်တရာယျတှကေိုရငျဆိုငျဖွရှေငျး ရမလဲဆိုတာကိုတော့ဇာတျကားထဲမှာပဲဆကျလကျကွညျ့ရှုခံစားပေးပါခငျဗြာ။
မညှနျးတော့ဘူးဆိုပမေယျ့ တဈခုလေးပွောပွစရာရှိပါသေးတယျ 😛ဇာတျကားရဲ့ အဓိက အားသာခကျြတဈခုကတော့ characters ကိုကျညီမှုရှိတာပါပဲအထူးသဖွငျ့Deadshot အဖွဈသရုပျဆောငျတဲ့ Will Smith နဲ့ရပေနျးစားနတေဲ့ Harley Quinn အဖွဈMargot Rubbie တို့ရဲ့ သရုပျဆောငျပီပွငျမှုတှကေတော့
ပရိတျသတျအထူးကွိုကျနှဈသကျကွလိမျ့မယျဆိုတာကြိနျးသပေေါကျ အာမခံရဲပါတယျ ။Joker အဖွဈ အမြားစိတျဝငျစားနတေဲ့ Jared Letoကိုလဲ သူပါသမြှဇာတျဝငျခနျး မြားအရသုံးသပျဖို့ခကျခဲနသေေးပမေယျ့ မဆိုးဘူးလို့တော့မွငျမိပါတယျ။
ဒါ့ကွောငျ့ rating တှေ Review တှေ ဘေးခဏခြိတျHype ခဲ့သမြှတှကေိုခဏမပွေီ့း မိမိအမွငျနဲ့ သာကွညျ့ရှုခံစားကွပွီး မိမိအမွငျနဲ့သာဝဖေနျသုံးသပျကွညျ့ကွပါလို့ပဲတိုကျတှနျးပါရစခေငျဗြာ/
အျော ဒါနဲ့ …. နောကျဆုံးမှာ နောကျလာမယျ့ Justice League ဇာတျကားအတှကျအစပြိုးထားတဲ့ post credits sceneပါပါ တယျမကွညျ့ဖွဈလိုကျမှာစိုးလို့ ကွိုပွီးသတိလေးပေးထားပါရစေ။
Hype တွေများလွန်းလို့ တကယ့်ဇာတ်ကားထွက်လာတော့ထင်သလောက်ခရီးမရောက်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ ဇာတ်ကားကိုဘယ်လိုဘယ်ပုံတွေကောင်းကြောင်း ဆိုးကြောင်းထပ်ပြီး မညွှန်းချင်တော့ပါဘူး။မျှော်လင့်ထားသလောက် ဖြစ်မလာပေမယ့်မကောင်းဘူးလို့တော့လဲလုံးဝပြောလို့မရတာတော့အမှန်ပါဒါ့ကြောင့် ဇာတ်လမ်းသွားလေးပဲ နည်းနည်းညွှန်းပေးပါရစေ။
ဇာတ်ကားကို Batman နဲ့ Supermanရဲ့တိုက်ပွဲအပြီးSuperman သေဆုံးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းကာလမှာဇာတ်အိမ်တည်ထားပါတယ်။
အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ Supermanလို လူစွမ်းကောင်းမျိုးသာ ဆိုးသွမ်းတဲ့ဘက်ကနေ လူသားတွေကိုဒုက္ခပေးမယ့်Villainတစ်ဦးဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် ဆိုတဲ့စိုးရိမ်စိတ်တွေဖြစ်လာကြတဲ့အတွက်Amanda Waller ဆိုတဲ့အမေရိကန်အစိုးရအဖွဲ့မှ အမျိုးသမီးကြီးရဲ့အကြံအစည်ကDC ရဲ့နာမည်ကျော် Villainsကြီးများနဲ့အဖွဲ့တစ်ခုထူထောင်ပြီး အစိုးရအနေနဲ့မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ကိစ္စများကိုသူ့ရဲ့Task Force X ခေါ် Suicide Squad အဖွဲ့ကိုလွှတိပြီးဖြေရှင်းစေဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Amanda ရဲ့ အကြံအစည်အောင်မြင်မလားဒီvillainsကြီးတွေကိုရောသူထိန်းချုပ်နိုင်ပါ့မလားSuicide Squadအဖွဲ့သားတွေကရောဘယ်လိုအန္တရာယ်တွေကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်း ရမလဲဆိုတာကိုတော့ဇာတ်ကားထဲမှာပဲဆက်လက်ကြည့်ရှုခံစားပေးပါခင်ဗျာ။
မညွှန်းတော့ဘူးဆိုပေမယ့် တစ်ခုလေးပြောပြစရာရှိပါသေးတယ် 😛ဇာတ်ကားရဲ့ အဓိက အားသာချက်တစ်ခုကတော့ characters ကိုက်ညီမှုရှိတာပါပဲအထူးသဖြင့်Deadshot အဖြစ်သရုပ်ဆောင်တဲ့ Will Smith နဲ့ရေပန်းစားနေတဲ့ Harley Quinn အဖြစ်Margot Rubbie တို့ရဲ့ သရုပ်ဆောင်ပီပြင်မှုတွေကတော့
ပရိတ်သတ်အထူးကြိုက်နှစ်သက်ကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကျိန်းသေပေါက် အာမခံရဲပါတယ် ။Joker အဖြစ် အများစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ Jared Letoကိုလဲ သူပါသမျှဇာတ်ဝင်ခန်း များအရသုံးသပ်ဖို့ခက်ခဲနေသေးပေမယ့် မဆိုးဘူးလို့တော့မြင်မိပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် rating တွေ Review တွေ ဘေးခဏချိတ်Hype ခဲ့သမျှတွေကိုခဏမေ့ပြီး မိမိအမြင်နဲ့ သာကြည့်ရှုခံစားကြပြီး မိမိအမြင်နဲ့သာဝေဖန်သုံးသပ်ကြည့်ကြပါလို့ပဲတိုက်တွန်းပါရစေခင်ဗျာ/
အော် ဒါနဲ့ …. နောက်ဆုံးမှာ နောက်လာမယ့် Justice League ဇာတ်ကားအတွက်အစပျိုးထားတဲ့ post credits sceneပါပါ တယ်မကြည့်ဖြစ်လိုက်မှာစိုးလို့ ကြိုပြီးသတိလေးပေးထားပါရစေ။